Malagasy (vahoaka) Info. About. What's This?
I Depiote na Mpisolo vava vahoaka dia olona voafidim-bahoaka tao anatiny mangaraharaha sy madio ara-pomba demokrasia. Noho izany dia voasokajy fanjakana mpanao lalàna ny depiote, ary rafi-panjakana mivondrona ka manana ny filoha manokana izy, dia ny antenimeram-pirenena.
Ny razana, aminny heviny ankapobeny, dia ny ray aman-dreninny ray aman-dreny sy ny ray aman-dreniniretsy farany sy ny ray aman-dreny talohaniretsy farany indray, ka miroso toy izany hatranihatrany, izany hoe izay rehetra nitaranaka na namela lovam-pomba aminny olona aty aoriana. Izany maha ray aman-dreny na taranaka izay dia mety ho ara-piterahana tokoa na araka eva fotsiny. Raha ara-piterahana ny maha razana dia lazaina fa manam-pifandraisana ara-tarazo ny olona roa raha razanny voalohany ny faharoa, na raha manana razana iraisana izy ireo. Misy ny vahoaka na foko manome fanajana manokana ...
Ny fitodika mpandray dia fitodika asahonny endriky ny matoanteny ao aminny fehezanteny izay ahitana lazaina manondro ny olona na zavatra na toerana iantefanny zavatra atolotra na alefa. Ny lazaina aminny fehezanteny mitodika aminny mpandray dia mitana ny anjara asa fameno zoina faharoa ao aminny fehezanteny mañano.
Ny Sihanaka dia isan ny vondrom-poko iray lehibe mandrafitra ny vahoaka malagasy, monina manodidina ny farihin Alaotra, voafaritry ny renirano Bemarivo ambony sy Tampoketsa Atsimo ao avaratra, ny renirano Mahajamba ambony ao andrefana, ary ireo havoana misy ny Bezanozano sy ny ala ao atsinanana. Ny tanàna lehibe any dia Ambatondrazaka. Araka ny lovan-tsofina sy tantara napetrak ireo olon-kendry sy mpanazary ary koa ny tantara iraisam-pirenena dia "Malay karazana" no razamben ny Sihanaka. Izany hoe iray tarika sy fiandohana amin ny vahoaka any Filipina, Malaizia, Marianas, Malukus, sns. Izy ...
Ny Bara Imamono dia Bara avy tamin’ ny Bara Be sy ny Iantsantsa ary ny Bara Mananantanana. Notarihin’ i Ratsimifoka sy Ratsimivily rahalahiny nankany Ankazoabo ny olona maro nanaiky azy, dia nampanaiky foko maro tany izy ary naka ny anarana hoe Bara Imamono. Taorian’ ny niorenan’ ny Bara Imamono tany Ankazoabo dia napetrak i Ratsimivily tao Lamatihy ny Bara Zafindravola izay avy tany Ivohibe ary ny Bara Vinda avy tany Betroka sy Benenitra napetrany tany amoron’ i Taheza.
Ny Bara Zafimarozaha Menambia dia vahoaka malagasy monina manamorona ny reniranonon i Tomampy ao amin ny Distrikani Midongy Atsimo, manodidina an i Lavaranty, fokontanin Ambalamanga. Isan ny foko bara izy ireo. Misy lohasaha sy loharano antsoina hoe Menambia ao amin ny faritra onenan ny Bara Manambia ary misy ny kobory lakato efa fahagola mbola andevenan olona mandraka androany.
I Hôsea na Ôsea dia mpaminany israelita voaresaka ao aminny Baiboly. Tao aminny Fanjakani Israely Avaratra izy no niasa taminny nanjakani Jeroboama. Mpiandry ondry no asany talohanny naha mpaminany azy ary vehivavy mpivaro-tena ny vadiny, izay atao hoe Gomera. Ny lovatsofina jiosy dia manao ani Hôsea ho nanoratra ny Bokini Hôsea.
Mpanao gazety dia olona manao asa fanaovan-gazety miaraka manangom-baovao, mandika ny lahatsoratra sy miaraka manao fanadihadiana antso-ratra sy ambava ary aseho vahoaka ny aminny alalanny fahitalavitra na radiô na gaezety taratasy ny vaovao izay hazo rehetra.
I Rehoboama na Roboama dia mpanjakani Israely fony ity fanjakana ity mbola tsy nivaky taorianny nahafatesani Solomona rainy ary lasa mpanjakani Jodà taorianizany. Izy no niteraka ny fisarahanny Fanjakani Israely ho fanjakana roa tsy nifanaraka, araka ny voalaza ao aminny Baiboly. Resahina indrindra ao aminny Boky voalohanny Mpanjaka sy ny Boky faharoanny Tantara ny ady maharitra nifanaovanny fanjakani Jodà tarihini Rehoboama sy ny fanjakani Israely tarihinny mpanjaka Jeroboama.
Raha faritana tsotra, ny teny hoe Polisy dia mpitandro filaminam-bahoaka, nohonizany ny Polisy dia manana andraikitra sy adidy lehibe aminny firenena iray, dia miaro ireo vahoaka sy ny fananany ao anatinny filaminana sy fitonina. Ary tafiditra anatiny andri-panjakana iray izy satria manana ministera miahy sy miadidy azy manokana ka anisanny mampihatra ny lalàna ihany koa.
Ny Apokalipsani Esdrasa na Apokalipsa jiosini Esdrasa dia soratra apokrifa na pseodepigrafanny Baiboly. Io boky io dia mitantara indrindra ny resaka nifanaovan’i Ezra sy ny arikanjely Oriela ao amin’ny fahitana. Tsy i Ezra no nanoratra io boky io. Misy fahitana fito niseho tamini Ezra na Esdrasa ny ao izay miresaka ny aminny fahotana sy ny famonjena ary ny andro farany.
Ny Salamo fahatelo na Salamo 3 dia salamo ao aminny Baiboly ao aminny Bokinny Salamo. Tafiditra ao aminny fizaràna atao hoe "boky voalohany" ity salamo ity.
Ny teny hoe Imanoela na Emanoela dia anarana hita ao aminny Baiboly, ao aminny Bokini Isaia izay anondroanny mpaminany ilay zaza hateraka sy hanafaka ny Fanjakani Jodà. Aminny Kristiana dia i Jesosy io Imanoela io, ary ny andro nahaterahanny Mesia no andro nahaterahani Imanoela izay atao hoe Kristy, araka ny voasoratra ao aminny Evanjelini Matio.
Ny Salamo faha-22 na Salamo 22 dia salamo ao aminny Bokinny Salamo ao aminny Baiboly. Tafiditra ao aminny fizaràna atao hoe "boky voalohany" ity salamo ity.
hahasambatra azy. Toa ny niaina fitsanganana tamin ny maty ny vahoaka tamin izany, vahoaka afa - patorana ka nahazo fahafahana. Nandritra ny fotoana fohy
iraisana izy ireo. Misy ny vahoaka na foko manome fanajana manokana ny razana, na ny mbola velona izany na ny efa maty. Ny vahoaka na foko sasany indray tena
mety mampalalaka ny fitomboan ny isan ny Jiosy malagasy ara - pivavahana. Israeliana Israelita Hebreo vahoaka Fokon i Israely Foko folo very Sefarada Askenazy
Amin ny fiteny malagasy dia matoanteny aman - tovana - ana ny matoantenin ny mpandray. Ohatra: Omen ny Fanjakana fanampiana ireo vahoaka sahirana mpandray
Ny Sihanaka dia isan ny vondrom - poko iray lehibe mandrafitra ny vahoaka malagasy monina manodidina ny farihin Alaotra, voafaritry ny renirano Bemarivo
Ny foko eto Madagasikara dia vondron olona isan ny vahoaka malagasy izay heverina fa iray faritra niaviana, nanana fandaminana ara - pôlitika iraisany
na Jehovah Tamin izany dia efa natao hoe Yehudhi izay notononin ny Malagasy hoe Jody na Jiosy izy ireo. Avy any Mesopotamia Araka ny Baiboly sy ny
natao hankaherezana ny firaisan - kinan ny vahoaka ny Merina. Araka ny hevitr ireo ao amin ny Trano Koltoraly Malagasy ny famerenana ny fankalazana izany amin ny
Ny Bara Imamono dia Bara vahoaka malagasy avy tamin ny Bara Be sy ny Iantsantsa ary ny Bara Mananantanana. Notarihin i Ratsimifoka sy Ratsimivily rahalahiny
tamin ny fotoan androny, dia liana te hahafantatra ny fitsipik ireo vahoaka feheziny mba hahafahany manao fandaminana indray eo amin ny fanjakàny